China Home kusimba rally kusimba bhendi nylon yakazara kuramba kurovedza muviri tambo mitambo trx Workout Mugadziri uye Mutengesi | NQ
Kumba kusimba Rally kusimba bhendi nylon yakazara kuramba kurovedza muviri tambo mitambo trx Workout
1. dhonza Tambo (inogona Kugadzirisa)
2. Anchor yepanze
5.net Bhegi kubva Hook kuenda Kubata
Chinja Kureba: 130cm-180cm
Yakakwana pakufamba & kushanda kunze mumba kana kunze. Sunga, toni uye kuveza muviri wako chero kupi, chero nguva mune mashoma seanosvika maminetsi gumi neshanu pazuva.
Iyo ATPWAVE Suspension Mudzidzisi inorema imwe lb. Unogona kuiimisa chero papi zvapo pasi peminiti. Shanda chero kupi zvako pane yako purogiramu.
Pisa mafuta, gadzira tsandanyama dzakaonda: Uine mazana matatu+ ekurovedza muviri, mabhanhire ekumisa achakupa mhedzisiro yemuviri, uchibatsira kupisa mafuta asingadiwe uye kuvaka mutete - kwete wakakura - mhasuru.
Inokurumidza, inonakidza, uye inoshanda, TRX inovaka mhasuru, inopisa mafuta, inowedzera kuchinjika, uye inovandudza kutsungirira. Aya mafambiro manomwe akareruka enheyo anokuwanisa iwe kutanga parwendo rwako rwekusimba. Nekugadzirisa kune kureba kwetambo dzako kana chinzvimbo chako chemuviri, iwe unozovhura isingaverengeke nhamba yekurovedza muviri. Kazhinji, padyo nepakati pegiravhiti yako pauriri-kana zvakatwasuka pasi pechinongedzo chauri-iko iko iko iko kurovedza kuchazonyanya kuoma.
Ichi chigadzirwa muchina unogona kusukwa mumvura inotonhora. Isa iyo unit mune yayo mesh bhegi (inosanganisirwa) kana pillowcase usati wageza kuti udzivise matambo akasungirirwa. Ita shuwa makwikwi etsoka akachengetedzwa kudzivirira kudzivirira kukuvara kune tambo dzenylon. Hang kana mhepo yakaoma chete.
50 × 35 × 30cm, 15pcs / ctn, 20KG, Mutengo ndewe Enhanced edition
Pashure: Yakasarudzika logo TPE yoga bhendi, Exercise Rubber kuramba bhendi, Workout kusimba Latex yemahara theraband
Zvadaro: Outdoor CampMilitary Yakagadzirirwa Kurara Bhegi Dhadha Pasi 800g Zadza munhu mukuru Kufamba Kurara Bhegi
Kuramba Kusimbisa Bhendi
Home Workout Varairidzi Kusimba Muviri Musuru Rolle ...
Hot kutengesa Roller Wheel Exercise Equipment Abd ...
Wholesale tsandanyama mitambo furo pachako murairidzi S ...
2021 yepamusoro nyanzvi kurovedza muviri equipme ...
Wholesale Cheap Adjustable Chitubu Weighted Magn ...
High yepamusoro nyanzvi chinjika epurasitiki pv ...